Xakamaynta Cayayaanka | December 2019
Sida loo isticmaalo daroogada "Strobe", tilmaamaha isticmaalka
Macnaheed "Strobe" waa fungicide gaar ah fasalka. Waxay bixisaa dagaal wax ku ool ah oo ka dhan ah cudurrada fangas ee noocyada dhirta kala duwan, taas oo uu heley aqoonsi caalami ah. Daroogada "Strobe": sharaxaadda "Strobe" waa daroogada jiil cusub, isticmaalka taas oo saameyn ballaaran ku yeelanaysa wakiilada sababa cudurada fangas ee dhirta badan.
La dagaallanka slugs ee beerta: farsamada, phytochemical, daaweynta dadka iyo ka hortagga
Slugs waa moleuska caloosha, taas oo kooraska kobcinta ay soo gaartay dhimis dhamaystiran ama qayb ka mid ah luminta qolofka. Slugs ee beerta waa mid ka mid ah cayayaanka ugu xun, sidaas darteed ma noqon doonaa mid aad u macquul ah si loo ogaado sida loola dhaqmo iyaga. Ma taqaanaa? Slugs jiifay ukumaha jiilaalka, taas oo aad u baahan tahay in la xasuusto haddii aadan rabin inaad hesho dufcaddii cusub ee cayayaanka guga.
Beerka dhulka hoose ee beerta: sharaxaadda cayayaanka, waxa la sameeyo marka la duubo
Bannaanka u khibrad badan, waxay u badan tahay, waxay horay u ogtahay cidda noocan oo kale ah (Carabidae) iyo waxa hawlaha faa'iido leh ay ku qabato beerta. Wixii bannaanka u janjeera iyo bannaanka u, ma noqon doonaa mid aad u badan oo ku saabsan wax badan oo ku saabsan buuggan weyn ee weyn, caadi ah in ku dhowaad dhammaan gobolladeenna. Xayawaanka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa - kaynta qashin qubka, beerta, caadiga ah.
Waa maxay cayayaanka ee blueberry
Blueberries saafi ah oo buluug iyo buluug ah marka laga reebo dhadhanka hodanka ah ee macno ahaan la buuxiyay fitamiino kala duwan iyo walxo raadraac ah oo leh waxyaabo badan oo faa'iido leh. Inkasta oo dhamaan faa'iidooyinka berriiga ah, baadiyaha blueberry ay tahay mid aan caadi ahayn degganeyaasha beeraha iyo guryaha. Goobidda iyo dayactirka xiga ee warshadu ma soo bandhigo dhibaatooyin gaar ah, si kastaba ha ahaatee, dhibic muhiim u ah beeridda waa dagaalka ka dhanka ah cayayaanka badan ee blueberries.
Sida loola tacaalo beerta beerta, guriga iyo beerta
Xanuun, ama qanjaruufo, waa cayayaanka amarka ee maqaar-garaan, ma aha noocyada oo dhan oo duuli kara, iyo kuwa awoodaan, badanaaba ha qaban. Cayayaanka ayaa jecel inay degaan jawi qoyan, degsiimo ballaaran oo laga heli karo meel u dhow qoyaanka. Maqalku wuxuu u dhowyahay meel u dhow dhulka beeraha u dhow dakhaarka.
Tui: Cudurada iyo Daaweynta
Thuja waa caan ku ah naqshadda muuqaalka sababtoo ah cirbadaha quruxda leh ee quruxda badan. Sidaa darteed, cudur kasta oo si degdeg ah ku dhuftey sharraxaad, mararka qaar keeno waxyeello aan la goyn karin. Aynu isku dayno inaanu ogaano waxa saameynaya saameynaya huruuda hurda iyo waxa la sameeyo si looga fogaado dhibaatadan. Thuja waxaa lagu gartaa qabqabasho la'aan iyo iska-caabbinta cudurada, iyo sidoo kale weerarada cayayaanka.
Sida loo jaro "Bi-58": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Iyadoo korodhka tirada bakteeriyada loo yaqaan 'pathogenic pathogenic', cayayaanka, cayayaanka, u-habaynta xaaladaha aan fiicneyn, baahida kiimikada sunta ah waxay kordhisaa saamiga. Wax-ku-oolnimada ilaalinta dalagyada beeraha, ubax iyo ornamental ee cudurada iyo cayayaanka ayaa badanaa ku xiran habka maamulka daroogada iyo walaxda firfircoon.
"Aktara": Halabuurka, qaabka waxqabadka iyo isticmaalka daroogada
Cunista dhirta iyo dhirta dhirta, dhirta waxyeellada leh iyo shilinta, marka lagu daro si toos ah loo yareeyo sifooyinka tayada iyo tayada ee dalagga, waa diiradda saarnaanta cudurada viral iyo fungal ee beeraha, miraha iyo ornamental dalagga. Xaaladaha caabuqa, sunta cayayaanka ayaa yimaada badbaadada.
Maxay yihiin sunta cayayaanka: sifeynta iyo astaamaha noocyada waaweyn
Ka hor inta ninkii beerta ama beerta xagaaga soo ururiyo dalagga, waa inuu wajahaa qaar ka mid ah daqiiqado aan fiicnayn, mid ka mid ah cayayaanka waxyeellada leh oo sidoo kale doonaya in lagu cuno dhirta succulent iyo goosashada dhadhan fiican leh. Si aad u ilaaliso dalagyada ka soo jeeda cayayaanka kala duwan, ukunta iyo dirxiga waxay noqon karaan caawinta cayayaanka - kuwani waa kiimikooyin gaar ah oo leh saameyn burbur ah cayayaanka waxyeellada leh iyo carruurtooda.
Habka ugu wanaagsan ee lagu maareynayo kaabajka laga bilaabo aphids (farsamada, dad, kimiko, bayoolaji)
Dhibaatada ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqaynayay waa cayayaanka oo cunaya dalagyada koray jacayl iyo shaqo adag. Qaar ka mid ah iyaga ayaa si dhakhso ah u dhufanaya, si adag u dareemi kara oo awood u leh inay burburiyaan dhirta beeraha ee waqtiga ugu gaaban. Ku saabsan mid ka mid ah kuwa dulin ah kuwaas oo cuno kaabajka, aynu ka hadalno maqaalkani.
Sida loo codsado Corado si loola dagaallamo baradho-baradho Colorado iyo aphids
Iyada oo bilawga xilliga beerta, badankoodu waxay la kulmaan su'aasha sida si wax ku ool ah ula macaamilaan baradho baradho ah. Tilmaamidda cayayaankan ayaa ah in ay ugu dambeyntii horumarinayso daawooyinka badankood ee tijaabada ah, sidaa daraadeed ma saameynayaan. Maqaalkani, waxaanu eegi doonaa daroogada ka soo duuduubka baradhada Colorado ee loo yaqaan Corado, faa'iidooyinka daaweynta iyo tilmaamaha isticmaalka.
Sida loola macaamilo wireworm: macneheedu waa halganka iyo daroogooyinka
Badanaa siliggu wuxuu noqdaa inkaartii beerta, gaar ahaan bilowga. Ka dib oo dhan, cayayaanku waxay badanaa ku dhacaan marar dhif ah oo ku yaal jardiinooyinka khudradda, kuwaas oo si joogto ah loo qabto muddo dheer. Dhibaatada ka timaadda dulinta ayaa ah mid aad u ballaadhan, gaar ahaan baradku wuu ka jiraa. Mararka qaarkood halganka isaga oo leh isaga oo sanado badan.
Noocyada lagu buufiyo dhirta iyo geedo guga oo ka soo cayayaanka
Haddii qofku u maleeyo inuu abuurayo geedka tufaaxa ah ee dacha, wuxuu u damaanad qaadayaa in uu isu keeno dalag badan oo tufaax ah inta ka dhiman noloshiisa, ka dibna mid si weyn ayaa looga niyad jabaa. Geedin geed (iyo sidoo kale dhalashada wiil) waa tallaabada yar ee ugu horeysa ee wadada dheer ee aad u baahan tahay inaad mareyso ka hor natiijooyinka ugu horeysa ee shaqooyinkaaga isweydaarsadaan.
Waa maxay cayayaanka ee mandarinsi
Mandarin - macmacaanka, noocyada citrus ciyaalka, oo ka tirsan qoyska Rutaceae. Waddanka reer mandarin waa China, waxaa loo keenay Europe bilowgii qarnigii 19aad. Waxyaallaha miraha leh waxay ka kooban yihiin sonkorta, asiidhyada organic, fitamiin C iyo thiamin, iyo sidoo kale wax soo saarka aan degenayn. Maanta, dad badan ayaa go'aansada in ay kobciyaan warshadani guriga.
Sida loola dhaqmo beerta beerta
Mararka qaar xayawaan yar ayaa keeni kara dhibaatooyin aad u weyn. Qoraalkan ayaa khuseyn kara, gaar ahaan, in la xoqdo - mammal yar oo miisaankeedu yahay 10 g oo keliya, kaas oo raadinta cuntada cunno waxyeelo u geysato sirqoollada beeraha, xididdada iyo dalagyada xididada dhirta. Waa kuwee shumacyada iyo qaababka ay ku wajahan yihiin beerta, waxaan eegaynaa qodobkan.
"Kalsooni": tilmaamaha isticmaalka daroogada
Si tartiib ah, cayayaanka waa in loo isticmaalo si loo ilaaliyo beerahooda iyo beerahooda cayayaanka. Dhammaantood ma dabooli karaan baahida beeraha warshadda: Qaar ka mid ah lacagaha waxaa loogu talagalay oo keliya nooc cayayaan ah, talaabada kuwa kale waxay ku xiran yihiin xaaladaha cimilada. In this article waxaan ka hadli doonaa qalabka "Confidor", taas oo, sida laga soo xigtay dib u eegista ee bannaanka iyo bannaanka u, buuxiyaa dhammaan codsiyada.
Boric acid waa qalab si caan ah loo og yahay oo loola dagaallamo cayayaanka kala duwan ee bini'aadamka ku dhibaateeya labadaba guriga dhexdiisa iyo guriga dhexdiisa, si loogu daaweeyo abuurka iyo quudinta ciidda. Cunnooyin kala duwan oo boric acid-ku salaysan la yaab leh natiijooyinka degdeg ah, fudaydka ah ee isticmaalka iyo waxtarka.
Sida loola tacaalo aphids daaweynta dadka, isticmaalka hababka la macmalay si loola dagaallamo cayayaan
Aphids ama injirta dhirta - cayayaan aad u halis ah, oo ka soo jeeda nolosha taas oo ku dhacda tiro badan oo dhaqamo kala duwan ah. Dhirta ay saameeyeen cayayaankan caadi ahaan waxay joojiyaan sii kordhaya, waa la dulmiyay, badanaaba way dhintaan. Sidaa darteed, marka la ogaado calaamadaha ugu horreeya ee duleelka, waxaa lagama maarmaan ah in si dhaqso ah loo qaado tallaabooyin lagu tirtirayo.
Sida loo isticmaalo daroogada "Alatar" ee beerta: tilmaamaha isticmaalka cayayaanka
Wax kasta oo aan dooneyno inaan rabno inaan koro dalag fiican oo aan lahayn daaweyn kiimiko ah oo keliya, hudheello, tani mar walba ma suurtogal maahan. Inta badan, cayayaanka cayayaanka iyo cudurrada dalagyada beeraha waa inay la dagaallamaan sunta cayayaanka - xeryahooda kiimikada khaaska ah ayaa loo isticmaalaa inay dilaan cayayaanka, dirxigooda, ukumahooda, iyo sidoo kale nematodes iyo tuubbo.
Xeerarka daryeelka mimosa ee guriga ku garaacaya
Mimosa bilaash ah waxaa loola jeedaa dhirta si sahlan u koraan, laakiin waxay qaadataa xoogaa dadaal ah. Waxaa la kori karaa sanad iyo sida geedka dilka ah. Laakiin kiis labaad, waxay si weyn u kala bixi kartaa iyo lumiyaan saamaynta qurxinta. Laakiin laga bilaabo waxaa suurtagal ah in la qaado miraha sannad walba oo cusboonaysiinta beerto ee xilli sii kordhaya ee soo socda.